X-Apps, izvo zvitsva zvinoshandiswa kubva kuLinux Mint timu | Linux Vakapindwa muropa
Semagariro, timu yeLinux Mint kuburikidza nemutungamiri wayo, Clem, yaunza maakaundi ayo emwedzi nemwedzi uye vatora mukana wekupa dzimwe nhau dzinouya neLinux Mint inotevera, Linux Mint 18. X-Apps izita reprojekiti nyowani uye iwo matsva mashandisiro ayo timu yeClem ichagadzira iyo vhezheni itsva.
X-Mapurogiramu achave akakosha kunyorera yakavakwa kubva kuGTK3 izvo zvinofukidza izvo zvakakosha zvekugovera kwese. X-Apps inobvumidza chero desktop kuti ivatore uye vagadzirise ivo kune zvavanoda usinga fanirwe kuvimba neiyo Gnome chirongwa.
X-Apps ichave iri nyowani chirongwa cheLinux Mint vagadziri
X-Apps uye shanduko iyi neLinux Mint inopindura mamiriro azvino aripo pakati pechitsiko cheLinux Mint uye nekuvandudzwa kweGnome. Linux MInt 17 yakavakirwa paUbuntu 14 iyo ine Gnome 3.10 seyayo desktop desktop neUbuntu 16.04 ichave neGnome 3.20 uye iri pakati pezvakawanda shanduko izvo timu yeLinux Mint inofanirwa kuita. Naizvozvo, vagadziri vakasarudza gadzira zvigadzirwa zvekutanga zvakazvimiririra kuvandudza chero desktop. Saka X-Apps ichaenderana neCinnamon, MATE uye Xfce pakati pevamwe.
Clem akasimbisawo kuchinja kukuru mumifananidzo zvekuparadzirwa asi isu hatisati taziva chero chinhu nezve iwo artwork, chete kuti mushandisi ndiye anozogona kusarudza pakati peiyo nyowani neyekare mifananidzo, iyo yekupedzisira kune yakanyanya nostalgic.
Ini pachangu, ini handinzwisise zvizere chiziviso ichi uye sarudzo yaClem nechikwata chake nekuti pachinzvimbo chekugadzira X-Apps kana kugadzira zvigamba, vanogadzira Linux Mint vanogona kuita sekumwe kugovera uye gadzira zvako zvekushandisa kubva kunobva kodhi. Nekudaro zvinoita sekunge zvakare vanozovandudza uye kuyedza kugadzira chena chitaridzi kunyorera, asi izvo zvinogoneka?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » X-Apps, izvo zvitsva zvinoshandiswa kubva kuLinux Mint timu
Ndinovimba musiki wayo weUS live inorarama chikamu chema x-apps, chirongwa ichi runako chairwo, izvozvi sezvo ini ndoshandisa musiyano we arch uye ndinonyatsosuwa iwo mapurogiramu ari nyore asi anodakadza zvisingaite, mamwe mapurogiramu uye nzira dzekugadzira usb mune linux havasi Ivo vanondishandira kana vari marara chaiwo .. -.-.
Pindura kune silva
Zenwalk, yakareruka kugoverwa neSlackware midzi